सम्बन्धमा किन टुट्छ विश्वासको जग ? « Drishti News – Nepalese News Portal
सम्बन्धमा किन टुट्छ विश्वासको जग ?
१३ कार्तिक २०७८, शनिबार 10:23 am
सम्बन्धको जग भरोसा र इमान्दारितामा निर्भर हुन्छ । जब विश्वासको जग हल्लिन्छ, त्यसपछि सम्बन्ध चकनाचुर हुन्छ । तर हामीले इमान्दारिताको परिभाषालाई एकदमै संकुचिन गरिरहेका छौं ।
सम्बन्धमा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ अर्थात् भावनात्मक धम्कीले झनै सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने गर्छ । तर हामीले हाम्रो भावनात्मक सम्बन्धलाई यति संकुचित बनाइरहेका छौं कि हामीलाई थाहा नहुँदानहुँदै पनि हाम्रा साथीमाथि ब्ल्याक मेलिङ भइरहेको हुन सक्छ ।
इगो राख्दै नराख्नुहोस्